आफनै छोराको बच्चाकी आमा बन्न खोज्ने यी कस्ती आमा!!
समाजमा जहाँ पनि आमा र छोराको नातासम्बन्धलाई सबैभन्दा पबित्र अनि निस्वार्थ हुन्छ भन्ने मानिन्छ । तर संयुक्य अमेरिकाको मिचिगन भन्ने सहरमा भने यसे घटना भएको छ जुन तपाँई कल्पना सम्म पनि गर्न सक्नुहुन्न होला । यो घटना सार्वजनिक भएपछि कत्ति मानिसहरु हैरान भए । हुन मोटामोटी कुरा त शिर्षक बाट नै प्रष्ट भयो होला । कुरा हो एक ५१ बर्षिय किम वेस्ट नाम गरेकी एक महिला आफ्नै छोरा बेन फोर्ड संगको यौनसम्बन्धबाट बच्चा जन्माउने तयारी गरेकी छिन् ।
ती महिलाले करिब ३० बर्ष पहिले आफ्नो बच्चा अरु कसैलाई पाल्न दिएकी थिइन, समय बित्दै जाँदा त्यो बच्चा ठुलो भयो अनि बिवाह गर्यो । बिहे पश्चात ति युवक आफ्नी आमाको खोजिमा लागे, आमाको बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै उनले आमालाई एउटा चिठ्ठी लेखे ।
चिठ्ठी पाउने बित्तिकै ति महिलाले आफुले जन्म दिएको छोरा संग भेट्ने निश्कर्षमा पुगिन् । दुबैजना एउटा होटलमा भेट गरेपछी रक्सी पिउन थाले, नशामा बेहोसी बनेर आपसमा चुम्बन गर्न लागे र पछि मन थाम्न नसकेर सम्भोग गरे ।
त्यसरी एक आपसमा यौन सम्पर्क कायम भैसकेपछी अत्यन्तै गहिरो प्रेम जाग्न थाल्यो, यस्तो सम्बन्धलाई उनिहरु अविश्वसनीय भन्दै जिन्दगीभर दम्पती कै रुपमा बस्ने निर्णय गरेसंगै युवकले आफ्नी श्रीमती पनि छोडिदिए ।
उनिहरुलाई दुनियाको नजरमा घिनलाग्दो अपराध ठानेपनि अन्तरआत्माले चाहेपछी आफ्नो सम्बन्धलाई उनिहरु पबित्र, जायज अनि चोखो भनेर दाबि गरेका छन् । आफुहरु छिटै बच्चा जन्माउने सोंचाइमा रहेको बताउदै आएका छन् ।
प्रकाशित : शनिबार, फागुन २६, २०७४१९:३९
साँचो समचार भन्दा झुटो समाचार कति गुणा बढि छिटो फैलन्छ (पुरा जान्नहोस्)
सन् १९८० देखि २००० सालमा जन्म हुने व्यक्तिहरुलाई धेरै भाग्यमानी मानिन्छ ! कारण यस्तो छ !
यी हुन् संसारको सबैभन्दा विषालु ४ सर्प ! टोकेको केहि मिनेटमै जान्छ ज्यान !
यो देशको युवती बिहे गर्ने पुरुषलाई स्थानीय सरकारले दिन्छ ठूलो रकम !
श्रीमान-श्रीमतीको सम्बन्ध कसरी रोमान्चक बनाउने ? यस्ता छन् ५ सूत्र !
यसरी बादरले ३ लाख रुपैयाँ लुट्यो
२४ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका